UHunt ucacisa ngokugigitheka kwakhe iChiefs ibukisa ngeSimba - Impempe
UHunt ucacisa ngokugigitheka kwakhe iChiefs ibukisa ngeSimba
May 16, 2021 May 16, 2021 Impempe.com
Sigcwale izinkundla zokuxhumana isithombe somqeqeshi weKaizer Chiefs, uGavin Hunt efa yinsini. Lesi sithombe besiveza ngokucacile umuzwa wabo bonke abasondelene naleli qembu laseSoweto kwazise beliqeda kubhaxabula iSimba SC ngo 4-0 ovuthayo.
Leli qembu laseTanzania yilo ebelithwelwe ngeqoma ukuthi lizozihubuluzela kuMakhosi kulo mdlalo womlenze wokuqala weCAF Champions League. Uhunt uvele waphela yinsini ngemuva kokuthi ezakhe zishaye igoli lesithathu.
“Bekusaphele imizuzwana eyimi kuya kwengu-15 ngiqeda ukubatshela ukuthi kumele senze kanjani uma lingekho ibhola kithi, nokuthi senze njani uma silithola.
“Livele laqhamuka kanjalo ke igoli. Akuvamisile ukuthi into yenzeke njengoba kade uyisho ebholeni. Yingakho ngivele ngahleka,” kuchaza uHunt ngemuva komdlalo.
Ngomdlalo, uHunt uthe ‘bazamile’ yize kuyiwini yakhe yokuqala enkulu kusukela efike kuMakhosi. Ezakhe beziye kulo mdlalo kunomuzwa wokungeneliseki kubalandeli ababhikishile ngoLwesihlanu ekuseni bethi bakhathele ukwenziwa inhlekisa kwabanye.
“Ngicabanga ukuthi sizamile. Siwakhile amathuba amahle okushaya amagoli kanti neminyakazo yethu beyimihle. Ukuphaselana kwethu bekungcono kakhulu.
“Kodwa ke kufana nokuthi kusaphele isiwombe sokuqala ngoba sizoya kubo ngeviki elizayo, futhi ngiyazi bazolwa kakhulu. Kumele silindele ukuthi bazobe bethelwe ngezibonkolo. Kuzomele silwe nathi, singabayeki bazenzele,” kusho uHunt.
Ucacise nokuthi kungani leli qembu lakhe lihluleka ukudlala kahle emidlalweni yeligi yakuleli, bese lenza izimanga kwiChampions League. “Ngike ngakusho lokhu phambilini…
“Indlela okudlalwa ngayo kwiChampions League iyahambelana nalaba badlali esinabo ngoba akusheshwa kakhulu. Beza kuwe kahle nje kanti kwiPSL abadlali bagijima kakhulu nebhola. Lana isivinini asikho kanti lokho kuyabavuma lababa badlali.”
Previous Previous post: Uthi bashaywe yinhlanhla uMngqithi eGibhithe, bazogeza igama ekhaya
Next Next post: Luzobungazwa ngezimpi usuku lokuboshwa kukaMandela